Ajụjụ ọnụ mụ na I. Biggi, onye mmeri nke Cerros de Úbeda maka akwụkwọ akụkọ mere eme | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Ajụjụ ọnụ mụ na I. Biggi, onye mmeri nke Cerros de Úbeda maka akwụkwọ akụkọ mere eme
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Asọmpi na Awards, Ajụjụ ọnụ, Ndị edemede, Novela
Onye edemede Basque Inaki Biggi emeriela na-agbata n'ọsọ Hills nke edabeda nke akwụkwọ akụkọ ihe mere eme ya na aha gi kacha nso Ugochukwu. Onye ode akwukwo Ebe nsọ y Usoro Stradivarius, taa raara anyị nye ajụjụ ọnụ a Ana m ekele gị nke ukwuu maka obiọma gị, oge gị na ntinye gị. Eskerrik asko.
I. Biggi: Ọ bụghị akwụkwọ mbụ, mana ọ ga-abụ akwụkwọ ọgụgụ site Ndị Nchọpụta Atọ ahụ, ebube Ngalaba iji dọta ụmụaka ịgụ ihe. Emeghachiri m otu n’ime ha n’oge na-adịbeghị anya iji gbalịa ịchọta usoro alchemical nke m nwetara ya. Na n'ezie otú ghara ikwu Salgari con Sandokan o Nwa Black Corsair.
Anaghị m echeta ihe mbụ m dere. Ọtụtụ ihe, ha niile funahụrụ. Ma ihe mbụ m dere nwere obere ntọala ọ bụ akwụkwọ mbụ m, Ebe nsọ, nke malitere dị ka obere akụkọ wee kwụsị karịa peeji 300.
I. Biggi: Ikekwe Chineke nna. Echere m na ọ bụ akwụkwọ akụkọ ahụ Ugboro ugboro m na-agụ, n'ezie akara. Ihe odide ya Mario Puzo ọ dị m ka enweghị m ike imeri ha. Vito Corleone ọ bụ ihe na-emenye ụjọ mana o nwere ugwu nke ya. Ngwakọta ahụ na-atọ m ụtọ.
I. Biggi: Tolkien, Maalouf. Ma Achiwo m ochi otutu ya na Sharpe, Pratchett, MendozaAgaala m kpakpando Asimov. Ma jiri sooo na-atụ ụjọ Stephen Stephen. Agatha Christie na Hercule Poirot ya. Ka m na-eche banyere ya m na-echeta ọtụtụ ugboro.
I. Biggi: Inigo Montoya de Onye kwere nkwa na adaeze. Ọgụ, mmekpa ahụ, ịbọ ọbọ, ndị dike, ọrụ ebube, mkpagbu, ezi ịhụnanya. Kedu ihe ọzọ ị nwere ike ịrịọ maka akwụkwọ?
I. Biggi: Readgụ ihe Echere m Ee e. M na-eme ya n’ọnọdụ ọ bụla na n’oge ọ bụla. Ana m adị nkịtị. Iji dee bụworị akụkọ ọzọ: ịgbachi nkịtị na ohere ịkwaga. Ọ bụrụ na m na oké iwe, na otú ụjọ m, Enwere m ihe ozugbo na ihe niile na-ewute m.
I. Biggi: Ebe enwere kọmputa, obi iru ala, oge na ohere. Anaghị m arịọ ọtụtụ, ka m bụ?
I. Biggi: Akwụkwọ akụkọ m mbụ Edere m ha n’oge m nọ mikpuo na akwukwo ogugu akwukwo obula atụmatụ izu ọjọọ dabara n’aka m, ha wee mara m ọtụtụ ihe. Ya mere echere m na m ga-ekwu Philip Van Den Bergen na Mmekọahụ nke Sistine, Ken Follet na Ogidi nke ụwa, Amin Maalouf na Njem Baldassare, Umberto Eco na Aha nke rose...
AL: favoritedị ọkacha mmasị gị?
I. Biggi: O doro anya akụkọ ihe mere eme. Ma kwa, na otutu, oji edemede na ọtụtụ ọrụ nke sayensị akụkọ ifo. E nwere ụfọdụ ụdị, ọ bụghị ọtụtụ, nke na anaghị m agụ agụ, mana abụ m otu n'ime ndị ahụ A na-agụ ha ruo mgbe akara nke colacao oge ọ bụla ị na-eri nri ụtụtụ.
I. Biggi: Ugbu a ka m nọ Oge olile-anya, akwụkwọ akụkọ kachasị ọhụrụ site na Emilio lara, na Gataca nke Frank thilliez.
Banyere ide ihe Anọ m na mgbazi nke akwụkwọ nke ise m, na-eche yana ụzọ ọpụpụ nke anọ, nke ga-egosi na mmiri, na imecha nkwadebe otu nke isii nke abanyeworị n'oge edere, ozugbo a chịkọtara akwụkwọ. Ha bụ akwụkwọ akụkọ nọọrọ onwe ha onye ọ bụla ọzọ na m na-amasịkarị idobere ha aghụghọ, bụrụ na ha merie.
I. Biggi: Ọfọn, gịnị kpatara anyị ga-eji arafu onwe anyị. Dị ka i kwuru nke ọma, enwere ọtụtụ ndị edemede na anyị niile chọrọ ịhụ ọrụ anyị na ụlọ ahịa, nke mefuworo anyị ọtụtụ awa, ọysụ na ahụhụ, na ezughị ezu iji nweta ya niile. Ndị nkwusa na-etinye ihe egwu dị na ego ma oge ụfọdụ ọ naghị akwụ ụgwọ. Anyị niile na-anwa ime ka ọrụ ndị ahụ pụta ìhè. Mgbe ị na-ebipụta akwụkwọ akụkọ, ụjọ na-atụ gị ugbu a maka ire ahịa n'ihi na onye ga-eme n'ọdịnihu dabere na ha. Ọ bụrụ na ị nwetabeghị ya bipụtara, ị na-aga site n'ụlọ ruo n'ụlọ ... Ọ dịghị mfe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Ajụjụ ọnụ mụ na I. Biggi, onye mmeri nke Cerros de Úbeda maka akwụkwọ akụkọ mere eme
Emily Dickinson. Afọ 189 nke ọmụmụ ya. Nhọrọ nke poems